Nosy Turks sy Caicos manavao ny fepetra takiana amin'ny TCI azo antoka
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Madagascar Malgache Vaovao » Nosy Turks sy Caicos manavao ny fepetra takiana amin'ny TCI azo antoka
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Madagascar Malgache Vaovao • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny mpitsangatsangana dia takiana amin'ny fizahana COVID-19 RT-PCR, NAA, RNA na Antigen ao anatin'ny telo andro.
Ny datin'ny fanangonana santionany dia tsy maintsy ao anatin'ny telo andro (72 ora) aorian'ny datin'ny dia.
Ny laboratoara dia tsy maintsy atao amin'ny laboratoara fitsaboana miaraka amin'ireto mari-pahaizana manaraka ireto: eken'ny College of American Pathologists (CAP); nosoratan'ny fanitsiana ny fanatsarana ny laboratoara klinika (CLIA); Mari-pahaizana ISO 15189.
Ny fitsapana antibiotika sy ny valin'ny kitapo fitsapana an-trano dia tsy ekena.
The Nosy Turks sy Caicos dia manambara fanavaozam-baovao momba ny fitakiana fitetezam-paritra mankany amin'ny toerana nalehany ho ampahany amin'ny TCI Assured, programa antoky ny kalitao mialoha sy fitsangatsanganana, izay mitaky ny mpitsangatsangana rehetra hanolotra valiny COVID-19 RT-PCR, NAA, RNA na Antigen vokatry ny fitsapana. fitsapana natao tao anatin'ny telo andro ny dia, nanomboka ny 28 Jolay 2021.
Ny datin'ny fanangonana santionany dia tsy maintsy ao anatin'ny telo andro (72 ora) aorian'ny datin'ny dia, izay nahena tamin'ny fitakiana fitsapana teo aloha izay hatao ao anatin'ny dimy andro ahatongavany, ary ny kaonty momba ny daty fitsapana amin'ny vavahady TCI Assured Ampio ireo mpandeha hamantatra hoe rahoviana no hanao ilay fitsapana.
Fanitsiana ankatoavin'ny Fitsipika momba ny fahasalamana ho an'ireo mpandeha tonga izay mihatra amin'ny 28 jolay koa dia misy ny fanekena ireo fitiliana Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR); Fitsapana ny fanamafisana ny asidra niokleary (NAA); RNA na fitsapana molekiola; ary fitsapana Antigen amin'ny fidirana amin'ny Nosy Turks sy Caicos.
Ny fitsapana dia tsy maintsy atao amin'ny laboratoara fitsaboana miaraka amin'ireto mari-pahaizana manaraka ireto: eken'ny College of American Pathologists (CAP); nosoratan'ny fanitsiana ny fanatsarana ny laboratoara klinika (CLIA); Mari-pahaizana ISO 15189. Talohan'izay dia ny fitsapana RT-PCR ihany no ekena. Ny fitsapana antibiotika sy ny valin'ny kitapo fitsapana an-trano dia tsy ekena.
"Faly izahay fa niarahaba soa aman-tsara ireo mpandeha tany amin'ny Nosy Turks sy Caicos tsara antsika nandritra izay herintaona izay ary manavao ny fepetra takiana amin'ny fivezivezena mba hiantohana ny fahamailoana mitohy sy amin'ny fiheverana ny fahombiazana sy ny fiovana amin'ny fitsapana COVID-19 misy," hoy i Honorable Josephine Connolly, Minisitry ny fizahantany ho an'ny Nosy Turks sy Caicos. “Maherin'ny 60 isan-jaton'ny isan'ny olon-dehibe ao amin'ny Nosy Turks sy Caicos no vaksinina feno, ka mahatonga antsika ho iray amin'ireo firenena be olona indrindra eran-tany; Miaraka amin'ny programa TCI Assured nohavaozina, matoky izahay fa hahita soa amin'ny ankapobeny ny fiarahamonina sy ny mpitsidika satria mitombo hatrany ny dia mankany amin'ny toerana itodiana. ”
Ao anatin'ny TCI Assured, izay efa napetraka ho an'ny mpandeha nanomboka ny 22 Jolay 2020, rehefa nanokatra ny sisintaniny ny mpizahatany, ny mpitsangatsangana koa dia tsy maintsy manana fiantohana ara-pitsaboana / fitsangatsanganana izay mandrakotra medevac (ho hita koa ireo orinasam-piantohana manome fiantohana mialoha. eo amin'ny vavahady), ny fangatahana fanadihadiana momba ny fahasalamana feno, ary ny fanamarinana fa novakiany sy nifaneken'izy ireo ny antontan-taratasy momba ny fiainana manokana. Ireo fepetra takiana ireo dia tsy maintsy fenoina ary ampakarina ao amin'ny vavahady TCI Assured, izay hita ao amin'ny Tranonkalan'ny Turista Turismo sy Nosy Caicos mialoha ny fahatongavan'izy ireo.
Ny Nosy Turks sy Caicos dia niambina hatrany ary tsy miova momba ny fepetra takiana amin'ny mpandeha iraisampirenena, izay mitovy amin'ny mpandeha vita vaksiny sy tsy vita vaksiny. Noho io antony io dia nahazo fampandrenesana ambaratonga 1 avy amin'ny Centers for Disease Control (CDC). Ity dia maneho ny dingana lehibe amin'ny fampielezana vaksinin'ny Nosy Turks sy Caicos, nanomboka ny volana Janoary 2021 ary nahatonga ny 60 isan-jaton'ny olon-dehibe vita vaksiny feno tamin'ny vaksinin'ny Pfizer-BioNTech — izay nahatonga azy io ho iray amin'ireo firenena voadidy indrindra eto amin'izao tontolo izao.